Stephen Hawking -4 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← Stephen Hawking -3
Stephen Hawking-5 →
သိပ္ပံပညာရှင်ဟော့ကင်းသည် ဌာနနှင့် ကာလ အကြောင်းအရာများကို လေ့လာခဲ့လေသည်။ ထို အကြောင်းအရာများ နှင့်ပတ်သက်၍ သူ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူစိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာမှာ –
ဘာဖြစ်လို့ စတင်ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ပါသနည်း?
ပျက်လျှင် ဘယ်လိုပျက်မှာလဲ? စသည့် မေးခွန်းများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
အဓိက ကတော့ စကြ၀ဠာ၏ ကံကြမ္မာနှင့် အရင်းအမြစ် The Origin and Fate of the Universe ကို စိတ်ဝင်စား ခဲ့သည်။ ထို အကြောင်းအရာများကို ရေးသားလိုသော ဆန္ဒရှိသည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာ အခြေခံတတ်မှသာလျှင် နားလည်နိုင်မည်ဟု သူက မတောင်းဆိုလိုပေ။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာ မတတ်သော်ငြား၊ သချာင်္ဗေဒ မကျွမ်းကျင်သော်ငြား သူ့စာအုပ်ကို နားလည်ရန် ရေးသားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ သူကြိုးစားခဲ့သည်ကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအား ဆုံးဖြတ်ပါရန် A Brief History of Time ကြေငြာချက်တွင် ထုတ်ဖော် ၀န်ခံထားသည်။
ထိုစာအုပ်တွင် Carl Sagan က နိဒါန်းရေးသည်။ Carl Sagan က Why nature is the way it is. သဘာဝတရားဟာ သူ့သဘာဝအတိုင်း သူ ဘယ်လို ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲ? ဆိုသော မေးခွန်းကို မေးလိုသည်။ ဟော့ကင်းက သူတတ်စွမ်းသလို ဖြေလိမ့်မည်ဟု သူယုံကြည်ခဲ့သည်။
လူသားတို့၏အသိပညာသည် မည်မျှ အကန့်အသတ်ရှိပါသနည်း? စကြ၀ဠာကြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရပါ သနည်း? စသော မေးခွန်းများကို Carl Sagan ကလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ လူ့အသိပညာ၏ အကန့်အသတ် နယ်မြေကို ၀င်စားလိုသည်။ ဟော့ကင်းသည် အထူးလေ့လာထားသော သင်္ချာပညာရှင် (သို့) သိပ္ပံပညာရှင်များသာ နားလည်နိုင်သော စာအုပ်အမျိုးအစားကို မရေးမူ၍၊ သူတတ်သမျှသော ရူပဗေဒပညာ စကြ၀ဠာဗေဒ ပညာရပ်များကို သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲရင့်ရင့်နှင့် ပရိသတ်ကြီး အားလုံးအတွက် နားလည်စေရန် ကြိုးစားထားကြောင်း Carl Sagan က ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
စကြ၀ဠာကို ဖန်ဆင်းရာ၌ GOD သည် မည်မျှ အခွင့်အရေးရှိသနည်း? အိုင်းစတိုင်း၏ နာမည်ကျော်ကြားသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ “Einstein’s famous question about whether God had any choice in creating the universe.” ဆိုသော မေးခွန်းကို ဟော့ကင်းသည် သတ္တိရှိရှိ ဖြေလိုက်သည် – “ကျွန်တော်တို့သည် GOD ၏ စိတ်ကို သိရန် ကြိုးစားနိုင်သည်” ဟု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခဲ့သည်။ စကြ၀ဠာသည် သူ့သဘာဝနှင့်သူ ဖြစ်နေရာ GOD မလိုကြောင်း ဟော့ကင်း၏ စာအုပ်၌ ဖတ်ရှုနိုင်သည်ဟု ရေးခဲ့သည်။
ဟော့ကင်းသည် စကြ၀ဠာကြီး၏ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို မှန်းဆကြည့်သည်။ တိုလ်မီသည် တစ်ချိန်က “ကမ္ဘာဗဟို နေက ပတ်သည်” ဟု ယူဆခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော့ပါးနီးကပ်(စ) နှင့် ဂယ်လီလီယိုတို့က “နေကဗဟို ကမ္ဘာကပတ်ရသည်- ကမ္ဘာသည် အပြား မဟုတ်၊ အလုံးဖြစ်သည်” ဟု ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ ယင်းကား သိပ္ပံပညာ၏ အဆင့်မြင့် ကျော်လွှားထိုးဖောက် အောင်မြင်မှုပင် ဖြစ်သည်။
စကြ၀ဠာသည် GOD ၏ ဖန်ဆင်းခြင်းကို သရုပ်ဖော်ခြင်း မဟုတ်မူ၍၊ မိမိသဘာဝအတိုင်း မိမိ သဘာဝ ဥပဒေသနှင့် သရုပ်ဖော်နေသည်ဟု ယူဆသောဘက်မှ ဟော့ကင်းသည် ရပ်ခဲ့သည်။
စကြ၀ဠာကြီးသည် အငြိမ်မနေ အချိန်နှင့်အတူ ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှားနေသည်။ သိပ္ပံပညာရပ်တွင် အထူးသဖြင့် ရူပဗေဒ ပညာရပ်တွင် အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီနှင့် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် သီအိုရီ တို့သည် နာမည်ကြီးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အဆိုပါ သီအိုရီနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်၍ မဖြစ်နိုင်အောင် အခြေအနေက ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီသည် ပြီးပြည့်စုံသော သီအိုရီ မဟုတ်သေးဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် သီအိုရီမှ ပေးအပ်လာသော အဖြေများသည် နောင်သောအခါ အတွေ့အကြုံနှင့် စမ်းသပ်၍ အမှန်အကန် သာဓကများ ရရှိလာသည်။
ဒါဝင်၏ Natural Selection သဘာဝကို လက်ခံရမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ သဘာဝသည် ကျွန်တော်တို့အား မှန်ကန်သော လမ်းစဉ်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်ပါမည်လား ဟု ၀င်စားစရာရှိသည်။ ပရိသတ်သည် သဘာဝဖြစ်ရပ်များကို စပ်ဆက်ဖြေရှင်းပေးမှ ကျေနပ်သည်။ သဘာဝဖြစ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းမပေးနိုင်လျှင် မကျေနပ်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရိသတ်များ ကျေနပ်အောင် သဘာဝ၏ ဖြစ်ရပ်များကို ရှင်းလင်းနိုင်လျှင် ၄င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော်တို့ နေသော စကြ၀ဠာကြီးထဲ၌ မည်သည့်အရာ မည်သို့ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရမည်သာ ဖြစ်သည်။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကလာသနည်း? ကျွန်တော်တို့ ဒီကို ဘာကြောင့် ရောက်နေသနည်း? ဆိုသော မေးခွန်းကို ဖြေကြားရန် ၀င်စားအပ်သည်။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို A Brief History of Time စာအုပ်၏ Our Picture of the Universe ဟု ခေါင်းစဉ်ပေးထာသော အခန်း(၁) တွင် ဖော်ပြထားလေသည်။